गर्भावस्थामा सिटामोलको सेवन पनि हुन सक्छ खतरनाक ! – Everest Dainik
गर्भावस्थामा सिटामोलको सेवन पनि हुन सक्छ खतरनाक !
गर्भावस्थामा प्यारासिटामोल या ब्रुफेन जस्ता औषधिको सेवनको जन्मिने सन्तानको प्रजनन क्षमतामा ह्रास हुन सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
स्कटल्याण्ड स्थित एडिनबरा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले सार्वजनिक गरेको एउटा शोधमा गर्भावस्थाका दौरान प्यारासिटामोलको सेवन गर्ने महिलाहरूका छोरीहरूको प्रजनन क्षमतामा नकारात्मक असर देखिन सक्ने जनाइएको हो । प्यारासिटामोल ज्वरो र शरीर दुःखाइको प्रचलित औषधि हो ।
वैज्ञानिकहरूले एडिनबरा विश्वविद्यालयस्थित एउटा प्रयोगशालामा एक हप्तासम्म मानव अण्डाणु र प्यारासिटामोल एकै ठाउँमा राखेर गरेको प्रयोगमा ४० प्रतिशत अण्डाणु कोषिका मरेको पाइएको थियो ।
यदि यही प्रभाव गर्भाशयमा पनि पर्ने हो भने यसले यो औषधिको सम्पर्कमा आउने केटीहरूमा अण्डनिषेचन कम हुनेछ । यसको प्रभाव स्वरूप महिलाहरूमा छिट्टै राजोनिवृत्ति आउन सक्ने र गर्भधारण गर्न थोरै समय पाइने कुरा शोधकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै डेलिमेलले जनाएको छ ।
शोधकर्ताहरूले जनाए अनुसार प्यारासिटामोल र आइब्रुफेनले प्रोस्टेग्लाइडिन इ-२ भन्ने हर्मोनको स्रावमा हस्तक्षेप गर्ने भएकोले यस्तो हुने गर्दछ । प्रोस्टेग्लाइडिन इ-२ प्रजनन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हर्मोन हो ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिचर्ड सार्पेका अनुसार यस शोधले प्यारासिटामोल या आइब्रुफेनबाट हुने सम्भाव्य जोखिमहरूमा केन्द्रित रहेको छ । प्राध्यापक रिचर्डकै शब्दमा, ‘अझै यसले मानव प्रजननमा केकस्तो असर पार्ने भन्ने बारे एकिन भन्न नसकिए पनि मोटामोटी आँकडाहरू आइसकेका छन् ।’
सम्बन्धित् समाचार ‘७ घण्टा भन्दा धेरै सुत्नु खतनाक'
ट्याग्स: health, paracitamol, Pregnancy